Bulgaariya Squats - Faa'iidooyinka iyo sida loo sameeyo | Bezzia
Bulgaariya-squats iyo faa'iidooyinkooda
Susana godoy | 10/05/2022 16:00 | Jimicsiga
Waxaa jira jimicsiyo badan oo aan ku dari karno hawl maalmeedkeena. Laakiin mid ka mid ah kuwa aan la waayi karin ayaa ah bulgarian squats. Waxaa laga yaabaa inaadan ku garanaynin kala duwanaanshahan magacaas, laakiin shaki la'aan, waa fikrad kale oo ay tahay inaad ku xisaabtanto. In ka badan wax kasta sababtoo ah waa mid ka mid ah dhaqdhaqaaqa ugu dhamaystiran.
Markaa laga bilaabo tan, waxaan ognahay inaan ku jiri doono gacmo wanaagsan, si aan u siino jidhkeena wax kasta oo uu u baahan yahay. Waxaad hoos ka heli doontaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato waxa ku saabsan squats Bulgarian runtii waa maxay faa'iidooyinka weyn. Kaliya markaas ayaad iyaga ka bilaabi kartaa sida ugu dhakhsaha badan. Diyaar ma tahay mise diyaar?
1 Waa maxay squats bulgarian ah
2 Faa'iidooyinka Squat Bulgaariya
2.1 Waxay xoojiyaan murqaha
2.2 Dabacsanaan badan
2.3 Dufanka gub
2.4 Waxay yareeyaan cellulite
Waa maxay squats bulgarian ah
Horeba magaceedu wuxuu muujinayaa in aan wajahayno noocyo kala duwan oo squats ah. Xaaladdan oo kale, noocyadan kala duwan ayaa la bixiyaa sababtoo ah si aan u awoodno in aan isku dhejino oo aan hoos u dhigno jirka, waxaan u baahanahay inaan hal lug dib u soo celino oo ku saabsan kala bar kor. Hubaal hadda waxaad garan doontaa waxay dhab ahaantii yihiin! Sideen u samaynaa si sax ah? Hagaag, marka hore waa inaad doorataa qayb sare, laakiin kama badna jilibkaaga. Waxaad istaagtaa dhabarkaaga qaybtan oo waxaad saartaa meesha sare ee cagtaada dhererkaas. Lugta kale waxay ahaan doontaa gebi ahaanba toosan, maadaama ay tahay barta taageerada dhulka. Hadda waa inaad laabtaa lugta toosan oo aad jidhkaaga ilaaliso adigoon kor u qaadin. Dabcan, xusuusnow inaadan hoos u dhicin, maadaama uusan jilibku dhaafi karin cagta.
Hadda oo aad taqaan sida loo sameeyo, waxaan sidoo kale kuu sheegi karnaa inaad dooran karto kuwa ugu caansan. Taas macnaheedu waxa weeye, kuwa ay ku fuliyaan jidhkooda, laakiin haddii aad rabto in aad ku darto xoojinta dheeraad ah iyo shaqo dheeraad ah, waxaad sidoo kale u ogolaan kartaa naftaada in lagu qaado by ku samee dumbbells gacmaha ama baarka. Adiga ayaa dooranaya!
Faa'iidooyinka Squat Bulgaariya
Inkasta oo ay run tahay in squats-ku ay ka mid yihiin jimicsiyadaas sababtoo ah waxay saameyn weyn ku leeyihiin jirka, Bulgarians kama foga. Way ku fiican yihiin inay dhexgalaan hawl maalmeedka.
Waxay xoojiyaan murqaha
Shaki la'aan, dhammaan noocyada jimicsiga ayaa leh mid ka mid ah ujeedooyinka ugu muhiimsan, sida xoojinta murqaha. Laga soo bilaabo gluteus maximus ilaa quadriceps iyo xitaa xudunta ayaa ka faa'iideysan doona. Sababtoo ah inkastoo qaarkood aysan si toos ah uga qayb qaadan, waxay sidoo kale ka qayb qaadan doonaan jimicsiga laftiisa taasina waxay ka dhigaysaa inay shaqeeyaan.
Si aan u gaarno dabacsanaan badan, waa in aan yeelanaa hab joogto ah oo joogto ah. Markaa wax yar wax yar ayaanu ku arki karnaa horumar jidhkeena ah. Markaad bilowdo inaad sameyso jimicsiyadan oo kale maalin kasta, kala-goysyadu way sii xoogaystaan, dabacsanaantuna way korodhaa mahadsanid taas. Iyadoo aan la iloobin inay sidoo kale ka hortagto dhaawacyada.
Waxaan had iyo jeer ka fikirnaa samaynta jimicsiyada qaarkood sababtoo ah badidoodu waxay ku fiican yihiin gubista baruurta. Bulgaariya squats waa sidaas darteed, waa inaan mar walba maskaxda ku haynaa. Haa, waa inaad isku dar jimicsiga wadnaha iyo xoogga jawaab wanaagsan. Markaa aad baan u gubi doonaa inta aan ku fekereyno.
Waxay yareeyaan cellulite
Cellulite waa dhibaato badan oo badan. Hubaal waxaad isku dayday dawooyin aan dhammaad lahayn, waana taas in dhammaanaysaa aanay fududayn. Markaa waa in aan yeelano cunto wanaagsan oo aan ku darsano jimicsiyada ugu fiican. Mid ka mid ah iyaga ka mid ah waa kan, sababtoo ah squats Bulgarian ayaa kaa caawin doona inaad ka takhalusto guntimaha aan loo baahnayn. Wax kasta oo ka badan sababtoo ah shaqada aan qabano waxay diiradda saartaa meelaha ay dhibaatadan cellulite inta badan ku urursan tahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Caafimaadka » Jimicsiga » Bulgaariya-squats iyo faa'iidooyinkooda
Khatarta caafimaad ee macaaneeyaha macmalka ah
Kuwa ugu cadcad inay ku guuleystaan ​​Eurovision 2022